Xirfadaha Gawaarida: Qaboojinta Matoorka, Ciladaha Kudhaca Gaariga, Baarista Ciladaha | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxamed Xirsi Faarax — April 22, 2020
Maqaalkan waxaa uga hadli doonaa:
Ciladaha kudhaca gaariga
Waa nidaam ay biyuhu ku dhexmarayaan balookada matoorka ayaga oo qaboojinaya galaasyada (meesha uu kadhaco qaraxa iyo gubashda, kadhasha hawada iyo shidaalka), biyaha kulul ee soo qaboojiyey matoorka waxay dib ugu laabanayaan raytooraha halkaas oo lagu qaboojinayo.
Habka qaboojinta matoorka:
Matoorka waa shay ay gudihiisa ka socdaan olol ay dhaliyaan bostomada waxa uuna ubaahan yahay qaboojin oo kala ah:
Matoorka oo kuqabooba biyo iyo hawo
Matoorka oo kuqabooba hawo kaliya
Matoorka kuqabooba biyaha iyo hawada; waxaa matoorkaas qaboojiya biyaha sidoo kalena waxa biyaha qaboojiya hawada, hadii ay biyuhu waayan hawo qaboojisa biyuhu ma qaboojinayaan matoorka.
Habka biyugu uqabooiyaan matoorka:
Biyuhu waxay matoorka kuqabooiyaan wareeg ay kudhex wareegayaan iyagoo qaboojinaya Olyada uu Matoorku isticmaalayo, galaasyada matoorka iyo dhamaan matoorka qaybihiisa. Biyaha qabow waxay matoorka ka soogalaan Hoosbeebka hoose, biyahakululna waxay kabaxaan Hoosbeebka sare. Biyaha kulul waxay dib ugu soolaabanayaan matoorka iyagoo qaboobay. Faaiidada wareega biyaha waa in ay kabaxaan biyaha kulul oo ay soogalaaan iyagoo sooqoobay.
Biyaha soogalaya raaiyitooraha waa biyo kulul oo xajmileh biyahaas markay soogalaan waaskada sare ee raaiyitooraha waxaa dhumaya awoodoodii waxayna raacayaan beebab yaryar ah oo tiro badan beebabka dhexdooda waxaa ku jira shini ama shabaq loogu talogalay in hawada marwaxada soojiidanayso ay kudhexmaraan si aayar ah. Markaas kadib bay uu daataan ama iskugu tagaan Waaskada hoose, waxaana soo laabanaya xajmigoodu waxayna Waaskada imaanayaan iyagoo qaboobay.
Raaiyitooraha biyaha waxaa uu leeyhay hawo celiye loogu talogalay in hawada ay maranawaxadu soojiidayso aysan beeldaroobin, hawo celiyuhu waxa uu uruuriyaa hawada marawaxada, waaskada hoose waxay leedahay kaag loogu talogalay in laga daadiyo biyaha kujira raaiyitooraha. Waxaa mamnuuc ah in lafuro furka raaiyitooraha gaariga oo kulul, furka raaiyitooraha godka uu xiro waxa uu leeyahy tuubo layiraahdo saaid.
Ciladaha kudhaca Baabuurka:
Ciladaha Baabuurku ladaarmi waayo:
Batariga oo dab la’aan ah
Salafka oo xumaada
Matoorka oo dukheeya
Ciladaha kudhaca kileeshka:
Saliida oo uu gudbi wayda kitka
Saliida oo uu daadiyo
Godka oo faaxa
Salid kabaxaysa oo yaraata
Godka saliidu kabaxo oo xirma
Warank oo gaabta ama dheeraada
Ciladaha kudhaca islef kileeshka:
Salida oo uu daadiyo
Waranka oo uu riixi waayo
Godka niiibelka oo xirma
Godka kitka oo faaxa
Eer gala saliida
Tuubo farasiibilaha oo dilaacda
Waranka oo dheeraada ama gaabta
Ciladaha kudhaca bilatoonka iyo saxan kileeshka:
Ilkaha bilatoonka oo daga
Cadaaadiska bilatoonka oo yaraada
Degis kudhacda cagafka
Nuglaan kudhacda bilatoonka
Gubasho kudhacda saxan kileeshka
Godka aasbariinada oo daga ama jilca
Dagis kudhacda cadka saxanka
Istaajin waa ama qaban waa
Lugaha oo uu qaar qabto
Kukala hormarid qabashada lugaha
Awooda istaajinta oo yaraata
Qabasho salka ah
Qaylo timaada marka bareega laqabanayo
Adkan kutimaada bareega
Ciladaha Hashkada Matoorka:
Waa maxay hashkadu?
Hashkadu waa matoorka marka uu sameeyo gariir, taas oo ka dhalata bostomada oo aan shaqo wacan samayn. Sidoo kalena shaqada matoorku waxa ay noqon kartaa labo:
Matoorku marka uu Miinimo yahay (marka uu sax yahay matoorku): waa marka uu matoorku ushaqaynayo siwanaagsan oo uu san lahayn wax hashkad ah ama gariirka khaladna uusan ka jirin bostomadiisa.
Iyo marka uu Maarsimo yahay (marka wax ka khaldan yihiin matoorka): waa marka matoorka gaariga wax ka khaldan yihiin, sida in gaariga faasadu isdabo marsan tahay oo aysan haysan sidhinka saxda ah, ama in biindadu wareegsan tahay sida gaariyaasha batrolka ah. Waxaana keena in faasada gaariga laga shaqaynayey oo aan sidii larabay loo sixin. Waxaana taas lagu daawayn kara gaariga oo miinimo looceliyo oo faasadiisa lasaxo.
Qaybaha hashkada keena:
Ciladaha kudhaca biyaha iyo hawada
Kulayl kudhaca matoorka
Kulayl yimaada marka gaarigu socod dheer sameeyo
Wareega biyaha oo istaaga
Wareega biyaha oo yaraada
Hawada oo yaraata
Hawada oo istaagta
Naqas raaca biyaha
Raaiyitooraha oo ay hawadu so dhexmariwaydo
Raaiyitooraha oo juuraato noqda
Olyada oo biyaha kudarmata
Haydarooliga oo kudarmata biyaha
Biyaha oo olyada kudarma
Inta aadan bilaabin baaris waa in aad hubisaa kuwan soosocda:
Hubin in gaariga naafto kuirto
Hubin in raasku naaftada sooqadayo
Hubin raasku in uu naaftada joogto
Hubin in naaftadu soo galayso bumbada
Hubin in naaftadu kabaxayso bumbada
Hubin in naaftada soobaxaysa ay awood leedahay
Barista ciladuhu waa hab ama wado laraaco marka labaarayo taas oo kuusahasha in aad sifudud uhesho cilada aad baarayso dabadeedna aad uxaliso cilada aad heshy, hadii aadan aqoon habka loobaaro ciladaha, waxaa dhacaysa in aadan helin cilada aad baarayso ama aad waydo. Waa in aad raacdaa habka barista ciladaha si aadan ugaysan dhibaato horleh. Barista ciladuhu waxay leeyihiin qawaaniin looraaco marka aad cilad baarayso:
Waa in aad taqaano shayga aad baarayso
Waa in aad aqoon uleedahay habka loobaaro shaygaas
Waa in aad shaygaas kabaartaa shaqadiisa
Shayga aad baarayso waa in aad ubaartaa qayb qayb
Baaritaanku waa in aad kala hormarisaa sida uu ukala xaqleeyahay
Hadii aad hesho cilad waa in aad baaritaan kusamaysaa
Waa in aad baaritaan kusamaysaaa in ciladaan saamayn kuyeelatay shaykale
Hadii aad hesho cilad waa in aadan warbixin dhiibin inta aad kasoo afmeerayso
Waa in aad isticmaasha masuuliyad inta aad baaritaanka kujirto
Baaritaanka aad samaynayso waa in aad kusamayso uruurin si aad usokoobtid ciladaha.
Waa in aad kala saartaa shayga aad baarayso inuu yahay mid wareega ama aan wareegin.
Cilada aad baarayso waa in aad xaqiiiso marka ay imaanayso iyo marka aysan imaanayn.
Baaritanka marka aad samayso waa in ay ciladu joogtaa ama ay imaanaysaa.
Ciladaha khatarta keeni kara waa in aad kubaartaa hab taxadar leh
Inta aad cilada kujirto waa in aad iska ilaalisaa dagdag iyo sahlashada cilada.
Baaritaanka inta aad kujirto waa in aad iska ilaalisaa baqdin iyo argagax.
F.G. Badbaadada guud: Sidee looga hortagi karaa dhibaatada? Waxaa looga hortagi karaa inta aysan dhicin kahor in laga digtoonaado waxkasta oo aadan aqoon hadii aad kashaqaynaysid iyo hadi kaleba.
Gaari marka aad kashaqaynso waa in aad marto sidan soosocota:
Dhig gaariga meel banaan ah oo siman.
Waa in aad damisaa gariga inta aadan shaqada bilaabin.
Waa in aad udhigtaa taako adag.
Tags: Baarista CiladahaCiladaha Kudhaca GaarigaXirfadaha Gawaarida: Qaboojinta Matoorka
Next post Halka Kemisterigu uga Jiro Sayniska Kale
Previous post Maxaad ka Ogtahay Caabuqa Caalamka Kaga Cabaadiyey ee Korona Fayras?